Bhodhi Mutambo Wongororo yeMhuka dzeMaple Valley: Yakasimba Mhuri Mutambo Usina Zvinoshamisa - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo.
Zvakaoma kudzivirira "Mhuka dzeAhorn Valley" panguva ino kana iwe ukatarisa zvakatenderedza bhodhi mutambo chiitiko. Iyo yakanaka artwork mutambo uripo pamakona ese. Mumutambo uyu wemhuri, vatambi vanoedza kuita kuti pekugara yechando ive yakasununguka sezvinobvira kumhuri yavo. Pamusoro peiyo yekirasi yevashandi yekuisa meshini, kune zvakare dhayisi kuiswa. Ongororo iyi inotarisirwa kuratidza kuti musanganiswa uyu unoshanda sei mukuita.
Pakupera kwa2020, mushandirapamwe weKickstarter wakaitwa nemuparidzi wekuCanada Vana Tafura Board Gaming (KTBG) yakapera nevanotsigira vangangosvika zviuru zvipfumbamwe, vanopfuura hafu yemiriyoni yemadhora ekuCanada yakasimudzwa uye chinangwa chaive zviuru zviviri nemazana maviri chakaitwa. Mutambo uyu wakavhoterwa mumitambo gumi inotarisirwa zvikuru muna 9.000 paBoardGameGeek. Saka tarisiro yemutambo iyi yaive yakawanda. Iyo hype yakakomberedza mutambo ichiripo mavhiki mushure mekuburitswa kwayo. Izvi zvinoruramiswa sei, uye kune ani mutambo wacho mutsva unopisa, zvinongofanirwa kutariswa muongororo iyi. Takatarisa mutambo maererano nemitemo yechinyorwa chechipiri. Pano nguva yakajairika yekutamba i2.200 pachinzvimbo chemwedzi misere (marounds). Uye zvakare, zera rakasimudzwa kubva pa10 kusvika ku2021 uye nguva yekutamba kubva pa6 maminetsi kusvika makumi matanhatu.
Bhodhi yemutambo muAhorntal ine pfungwa, mufambi uye makadhi ekuvandudza Mufananidzo: Jonas Dahmen
Kunze hui, mukati zvakare
Iyo dhizaini inokodzera zvisina musono mumutsara wemifananidzo yakanaka yakaringana mwero paKTBG. Zvisingashamisi, iyo optical quality mukati mebhokisi zvakare ndeyemhando yepamusoro. Zvese zvakanyatsoenderana uye zvinonyatsoenderana kune mumwe nemumwe, kungave pamakadhi, nhandare yekutamba kana mabhodhi evatambi. Mamepu ese (mazano, kuvandudzwa, vafambi, sango uye mafuro) akatetepa uye ane kupera kunonakidza. Ukobvu hwakaderera hwemakadhi hahuratidziki husina kunaka pakusimba. Mukuyedza, idzi dzainge dzisingaite kinks kana zvakadaro. Kune huwandu hwe9 hwakasiyana zviwanikwa zvemakadhi, ayo anogona kuchengetwa kure mumabhegi epurasitiki akakura zvishoma mushure mekunge avhurwa. Kune zvakare mifananidzo yemapuranga, zvivakwa zvemapuranga uye madhaisi mune mashanu evatambi mavara uye mana emumusha dhayisi.
Huwandu hwezvipfumbamwe zviwanikwa zvemutambo: mari, nyaya, nyaradzo uye zvitanhatu zvinhu Mufananidzo: Jonas Dahmen
Classic worker placement ine dice mechanism
Mitemo uye nzira yemutambo inodzidzwa nokukurumidza. Munguva yekuseta kwemutambo, makadhi echirimo uye ezhizha esango nemafuro anobviswa, kuitira kuti kadhi remwaka mutsva rionekwe mune imwe neimwe yemataundi matanhatu. Mushure mekunge kadhi rekupedzisira rekuvhuvhuta riri kutamba, nguva yechando inouya uye chibodzwa chekupedzisira chinotevera.
Pakutanga kwekutenderera kwega kwega, kadhi idzva remufambi rinoratidzwa pabhodhi remutambo muimba yevaeni, iro rinopa vatambi maitiro uye zvakanakira pamwe nenzvimbo dzekuita. Ipapo munhu wese anokungurusa madhii emhuri yavo maviri. Kuziva izvi, munhu wese anotumira vashandi vake panguva imwe chete. Chii chakakosha zvichienzaniswa nemimwe mitambo yekuisa vashandi ndechekuti nzvimbo dzega hadzigone kuvharwa nevamwe vatambi. Munhu wese anogara aine nzvimbo dzese dzekusarudza kubva. Mumaitiro echinyakare ekuiswa kwevashandi, nzvimbo dzinonyanya kupa zviwanikwa izvo zvinogoneka zvino kutengwa kune dzimwe nzvimbo kana makadhi emaoko anogona kubhadharirwa nekuridzwa. Kunyatsorongeka kwezviwanikwa zviripo zvinoenderana nemwaka uye sango rakavhurika uye meadow makadhi.
Kana vese vaisa vashandi vavo, madhaisi mana emumusha anokungurutswa. Zvakare, vatambi vanogona zvino kugovera mhuri yavo dhayi uye dhayi remumusha kunzvimbo dzavakatumira vashandi vavo. Kana vakakwanisa kuvhura nzvimbo nenhamba dziripo pane dhayisi, vanogona kushandisa chiitiko chinoenderana. Kana dhayi isingabvumiri izvi, kana kana iwe usingadi kushandisa chimwe chiito shure kwezvose, unowana chiratidzo chekunyaradza sekunyaradza. Izvi zvinokutendera kuti uwedzere kana kudzikisa huwandu hwemapoinzi pane inofa neimwe yenguva yako. Pakupera kwechijana chomunhu pachake, makadhi ane zvinhu zvakaunganidzwa anogona ipapo kuridzwa. Muganho weruoko ndewechitatu, sezvakaita ruoko rwekutanga, panguva iyo zvingave zvakakodzera kurasa. Ipapo dhayi remumusha rinopfuudzwa uye mutambi anotevera anovapa kunzvimbo dzevashandi vavo.
Pakupera kwekutenderera kune yakajairika "kuchenesa". Makadhi anotsinhaniswa uye anomiswa, kadhi remufambi rinosiya imba yevaeni, sango idzva uye meadow makadhi anoratidzwa uye mutambi wekutanga anopfuudzwa.
Zvikamu zvevatambi vane vashandi, dhayisi, zvivakwa uye tableau, kuseri kwayo ndiko kunongedzo kunopera. Mufananidzo: Jonas Dahmen
Mukuwedzera, mutambo wacho unosanganisirawo solo mode. Asi izvi zvinoita sezvisina rudo zvichienzaniswa nezvimwe zvese zvirimo. Iko hakuna otomatiki kana zvimwe zvekugadzira mutambi zvinhu. Nemitemo yakafanana yemutambo wevazhinji unoenda pakuvhima kwepamusoro. Pakupera iwe unowana inosetsa zita rakavakirwa pane yakaunganidzwa zviratidzo uye nhamba yezvimwe zvinhu. Iyo inobatsira chaizvo pakudzidza mutambo, asi zvakare inoratidza iyo yega yega chimiro chemutambo. Kana iwe uchida zvinopfuura kuvhima kwakashata kwemapoinzi, unofanirwa kushandisa mimwe mitambo yemutambo wega.
Nhamba yevatambi: 1-5 vanhu
Nguva yekutamba: 60 maminitsi
Genre: mutambo wemhuri
Maitiro makuru: kuiswa kwevashandi, kuiswa kwemadhayisi
Vanyori: Roberta Taylor
Mifananidzo: Shawna JC Tenney
Muparidzi: Bhodhi Game Circus / Vana Tafura Bhodhi Yemitambo
Mutengo: 45 euros
Iyo Board Game Circus yauya Mhuka dzemupata wemaple mutambo wemhuri wakasimba muchirongwa. Izvi zvinounza kutaridzika kwakanaka kwazvo. Mutambo uyu haudzorere vhiri, asi musanganiswa wayo wemushandi uye dhayisi kuiswa kunoshanda zvinogutsa.
Mutambo uyu uri mumusoro munzvimbo dzinozivikanwa. Kure nekuve mutsva kana kusarudzika, madingindira esango nemhuka anoshanda zvakanaka nguva nenguva. Kunyanya kune iyo artwork, iyi tema inopa yakawanda scope kune yakanaka uye inofungidzira dhizaini, iyo yakaitwawo zvinoyevedza pano. Madiki mashoma ebhodhi mutambo Isita Mazai zvakare apinda mumutambo muchimiro cheFossilis (zvakare KTBG), Everdell uye Flügelschlag, iyo vatambi vanoteerera vanogona kuwana pamakadhi epfungwa. Zvakadaro, mutambo uyu haugarokwanisa kuburitsa dingindira rekuvaka pekugara munguva yechando nenzira inogutsa. Mune dzimwe nzvimbo zvinoramba zvichinyanya kugadzirwa kuti zvidaro. Kunze kwepamusoro pehuna hunogoneka kuvandudzwa, sarudzo dzako hadzina kunyatso kusimudzira mukuchinjana. Kupfupikiswa kwemutambo muchikamu chechipiri kubva pamasere kusvika matanhatu kwakanakira mutambo.
Zvinhu zvemutambo zvakanaka. Rudzi rwezvinhu zvitsvuku zvehuni rinotarisa kune burgundy uye, mukuenzanisa nemakumbo matsvuku, hazvina kunyatsojeka kusiyanisa kubva kune violet zvinhu. Makadhi matete zvinooneka pane mimwe mitambo yakawanda. Kuti izvi zvichakanganisa sei kwenguva yakareba hazvigone kuongororwa panguva ino. Mumitambo yekuyedza, hapana kuwedzera kukonzeresa kwemakadhi kukinking kana kukotama kunogona kutariswa. Zvose zvipfumbamwe zviwanikwa zvinonyatsozivikanwa. Iyo iconography pamakadhi zvakare yakajeka pano. Iwo ega tokeni ese ari madiki. Zvisinei, kwete kuduku zvokuti kubata navo kunova denho huru.
Iyo yakanyatso kurongeka seti yemitemo inoita kuti zvive nyore kuwana nzira yako muAhorntal. Kufungidzira kwakawanda kungadai kwakadikanwa kune iyo solo modhi, iyo kunyangwe kupfupikiswa kwemutambo wevazhinji unofanirwa kuramba uchiridzwa pamusoro pemasere masere, sezvo zvibodzwa zvematanho ega zvisati zvashandurwa. Apa ndipo panopinda musimboti solitaire hunhu hwemutambo. Kunze kwekuvandudzika kushoma kunomiririra nzvimbo nyowani (clearings) kana kupa mapoinzi kubva pamakadhi munzvimbo yechando pekugara yevamwe vatambi, munhu wese pano anotamba zvakanyanya kana zvishoma asina kukanganiswa. Kusavharira nzvimbo nevashandi kunoita basa guru pano. Izvi zvinobvumira chikamu icho vashandi vanotumirwa kunze kunoridzwa mukufanana uye chinhu chenguva chinodzokera kumashure. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kune vatambi vadiki kuwana mukana. Nemachubhu mana emumusha, kwatove nechinhu chinomisa chenzvimbo, icho, zvisinei, chisingagone kufurirwa nemutambi chero upi zvake. Rombo redhisi rinogona kungogadziriswa zvishoma kuburikidza nenyaradzo zvigamba (kana iyo almanac kuvandudzwa).
Iwo machubhu emumusha ndicho chinhu chemutambo chakazoita chakanyanya kunetsa muyedzo. Kunyanya kana dzimwe nzvimbo dzisingakwanisi kuvhurwa paunenge uchigovera dhayisi uye uchifanirwa kusarudza kuti ndedzipi nzvimbo dzekuvhura, nguva yekudzikira mumitambo ine vatambi vatatu kana vana inogona kukwira zvakanyanya panguva yekutenderera kwega. Kana iwe ukaunganidza mamwe madhizi kubva kune mimwe mitambo, unogona kudzivirira dambudziko iri uye munhu wese anoisa dhayi nevashandi vavo panguva imwe chete.
Mutambo uyu hauwane budiriro yakawandisa panguva yayo. Iwe hauvaki chero chinhu chakakodzera kutaurwa nemazano uye kuvandudzwa kunowedzera sarudzo muchitima. Matenderedzwa ega ega anonzwa akafanana zvakanyanya zvisinei nekuti ndeyekutanga, yechipiri kana yekupedzisira.
Mukupedzisira, zvisinei, kunyangwe paine hype huru pamusoro pemutambo, iwe unofanirwa kuziva kuti hausi kubata neEverdell clone kana Everdell mwenje. Kubatana uku hakuna kutsauka kubva padingindira uye maitiro eiyo artwork.
Sezvinoratidzwa nezita remuparidzi wekuCanada, uyu mutambo wemhuri (wakaoma zvishoma). Inopa sarudzo dzakakwana kuburikidza ne "resource puzzle" iyo kunyange vane ruzivo rwebhodhi vatambi vachanakidzwa pano. Iyo rombo chinhu chedhizi inoderedza kugona kuronga zviito. Zvisineyi, izvi hazvina kumira zvakanaka muchikamu chese chemutambo wemutambo uye zvinochengeta kuoma kwemutambo kwakadzikira pane dai yaive "yechinyakare" yekuisa mushandi.
Mumaonero akazara munhu ane Mhuka dzemupata wemaple kwete mutambo wepamusoro gumi kana wepamusoro makumi mashanu. Nguva dzakakosha hadzipo. Zvakangodaro, iwo mutambo wakasimba wemhuri uyo kunyange vatambi ve connoisseur vanonakidzwa.
Board Game Circus BGC19564 - Mhuka dzeMaple Valley * Parizvino hapana ongororo 37,27 EUR tenga
Mhuka dzemupata wemaple
mhedziso Maple Valley Mhuka ndeimwe yemitambo inoyevedza yegore. Zvisinei, haigoni kupembedza zvizere hype huru yakaipoteredza. Iwo-akapoteredza akasimba mushandi uye dice yekuisa mutambo pasina zvakawanda hunyanzvi. Uyu mutambo zvirokwazvo isarudzo yakanaka kwazvo yemhuri yakasununguka uye yakajairika mitambo yemanheru.
Kare Toy Prize 2022: HCM Kinzel nemitambo miviri yemhuri
Inotevera Oranienburger Kanal: Neuer Rosenberg sevanhu vakawanda
Star Wars Eclipse: Mutambo mutsva muzera regoridhe reJedi
Pokémon Munondo uye Shield kutengesa kweNintendo Chinja kutaura zvakawanda
Conan Asina Kukundwa: Funcom Inozivisa Chaiyo Nguva Yekuita Mutambo
Asmodee: Kubwinya kunowanikwa paBoard Game Arena